Tsy ianao no harena 500 | Martech Zone
Alahady 22 aprily 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Roger Yu avy any USA Today vao nanoratra lahatsoratra andro vitsivitsy lasa izay orinasa mandao ny fanaovana bilaogy:
Miaraka amin'ny fisian'ny media sosialy, orinasa maro kokoa no manolo ny bilaogy amin'ny fitaovam-pandehanana mitaky fotoana sy loharanom-pahalalana kely kokoa, toa ny Facebook, Tumblr ary Twitter.
Mandanjalanja ihany ny lahatsoratra iray manontolo… fa ny data dia mety ho diso amin'ny solontenan'ny orinasa rehetra. Voalohany, ny angona voaresaka dia avy amin'ireo orinasa Fortune 500 mitombo haingana indrindra. Ity no tantara taloha momba ny causation mifanohitra amin'ny fifandraisana. Mandao ny fanaovana bilaogy ve ireo orinasa? satria ny tetika dia tsy manampy azy ireo hitombo sa mandao ny fanaovana bilaogy izy ireo satria mihabe?
Mbola betsaka ny orinasa lehibe mamoaka ny mahafinaritra bilaogy orinasa. Ary tsy karazan'olona miteny aho fa ny fanaovana bilaogy no tetika mety indrindra ho an'ny orinasa rehetra. Raha manana marika mahafinaritra ianao, mpanaraka tsara ary orinasa mitombo sy mahazo tombony… azonao atao ny mandingana ny fitantanana bilaogy orinasa. Tsy midika akory izany fa ny tetika apetraky ny orinasanao dia tsy mora toa ny fanaovana bilaogy ataon'ny orinasa… mety handany fotoana sy vola bebe kokoa amin'ny varotra hafa sy ny angovo fifandraisam-bahoaka ianao tsy araka ny noeritreretinao.
Saingy tsy ianao no iray amin'ireo orinasa mitombo haingana indrindra ao amin'ny Fortune 500, sa tsy izany? Fantatra ve ny orinasao eo amin'ny sehatra nasionaly na iraisam-pirenena? Hita ho mpitarika eritreritra eo amin'ny sehatry ny indostria ve ianao? Marika azo itokisana sy manam-pahefana ve ianao henon'ny indostria? Manjakazaka amin'ny valin'ny fikarohana ve ianao? Manana teti-bola ara-barotra miaraka amin'ny fahalalahana hanangana izany paikady amin'ny fampiasana fomba hafa izany ve ianao?
Raha jerena ny loharanom-pahalalana, tsy mila manao bilaogy ho an'ny orinasako koa aho. Afaka nanambola bebe kokoa aho tamin'ny fifandraisana amin'ny besinimaro, ny fanohanana, ny dokam-barotra ary ny fanosehana hiteny amin'ny hetsika manerana ny firenena. Fa haitraitra tsy zakako izany. Mety amiko ny mitoraka bilaogy satria afaka mampiasa fotoana sy hery… sady loharano lafo nefa izay hitako mampiroborobo ny orinasako hatrany.
Ny ahiako amin'ity lahatsoratra ity dia, raha ny fahitana azy voalohany, dia mety hijery ity lahatsoratra ity ny orinasa ary hahita fa fialan-tsiny lehibe tsy hijerena bilaogy ho paikady azo tanterahina. Ny fanapahan-kevitra hampiasa vola amin'ny paikady fanaovana bilaogy dia sarotra lavitra noho ny mijery fotsiny izay ataon'ny Fortune 500. Blogging is fampiasam-bola maharitra izay mitaky fanoloran-tena, loharano ary paikady hampandeha tsara azy.
Mino manokana aho fa ny ankamaroan'ny orinasa dia mandoa onitra amin'ny fanaovana bilaogy satria tsy manome valiny eo noho eo izay takian'ny orinasa lehibe sasany. Mora kokoa ny mandoa vola raha te hisarika ny saina hisarika ny saina… tsy ny fanontaniana no mandeha, fa ny halava, ny fotoana ary ny antony hampidiranao tetikady iray amin'ny iray hafa.
Fanamarihana iray hafa, tsy mahagaga ahy ihany koa fa ny haino aman-jery lehibe miaraka amin'ny mpanao gazety, tonian-dahatsoratra ary mpanonta matihanina dia manoratra momba ny voka-dratsin'ny fitorahana bilaogy. Sayin fotsiny!
Tags: fitorahana bilaogybilaogy orinasaharena 500fortunue
Hevi-diso diso 6 mahazatra